Flim2MM: Thor : God of Thunder (2011) + The Dark World (2013)
Thor : God of Thunder (2011) + The Dark World (2013)
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက စကြ၀ဠာတွင် အဖွဲ့ အစည်း ၃ ခုတည်ရှိသည်။ Giant Frost, Asgard နှင့် လူသား မျိုးနွယ်များဖြစ်သည်။ Giant Frost က လူသားမျိုးနွယ်စု နေထိုင်သည့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သည်။ သို့ သော် Asgard က အနှီ ကျူးကျော်မှုကို လက်မခံပဲ Giant Frost များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Asgard လူမျိုးနွယ်စုက အနိုင်ရရှိပြီး Giant Frost မှ အရေးကြီးဆုံး လက်နက်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်သည့် သဘောတူညီချက် ကိုပြုလုပ်သည်။
Thor တစ်ယောက် မင်းသားဘ၀ကနေ ကမ္ဘာကြီးမှာ သာမာန်လူအဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုများ ဆက်လက် အသက်ရှင်မလည်း၊ Asgard ပြည်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိအုန်းမှာလည်း၊ သူမရှိပဲ Asgard တိုင်းပြည်ရေး အခြေအနေ ဘယ်လိုများ ပြောင်းလဲ သွားမလဲဆိုတာ…..
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Yatanarpon (http://news.yatanarpon.com.mm/entertainment/movie/international/thor )
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Fantasy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 823 MB/ 843 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 55 mins / 1h 52 mins
[Translated By]:…………………..:) Lotus Black
[fixed By]:………………........…..:) Wai Linn Kyaw
Thor : God of Thunder (2011)
Posted by Y Junction at 5:30:00 AM
Dead Link plz recover Admin